Guuleed oo walaac ka muujiyay natiijada imtixaanka dowladda | KEYDMEDIA ONLINE
Guuleed oo walaac ka muujiyay natiijada imtixaanka dowladda
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa walaac ka muujiyay natiijada imtixaanka Dugsiyada Sare ay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya sanadkaan qaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guuleed oo mar soo noqday guddoomiyihii Dalladda waxbarashada EFPENS ayaa sheegay in aysan wax dhici kara aheyn natiijada imtixaanka, isagoona hoosta ka xariiqay in muddo 25 sano ah uu arrimaha waxbarashada ku jiray aanu waxaan oo kale uusan arkin.
Halkaan Hoose ka akhriso qoraalka.
1-Sida ka muuqata jaantuska natiijada imtaaxanka waxaa guud ahaan u fariistay 33,727 arday, waxaana haray/dhacay 8,550 arday, taas oo ka dhigan 25.35% celcelis ahaan. Tani waa arrin argagax leh muujineysana fashal muuqda oo ku yimid nidaamka waxbarashada ee dalka marka indho aqooneed lagu eegno .
Ugu danbeyn waxaan ugu baaqayaa madaxda Dowladda Federaalka ah in aan la fududeysan mustaqbalka Dhallinyarada Soomaaliyeed iyo walaaca waalidiinta heysta, sigaar ah waxaan usoo jeedinaya in guddi heer Qaran loo saaro arrintan oo xaqiijin ku sameeya hufnaanta habkii loo qaaday imtixaankan iyo habkii loo saxay intaba.